Ungawatsala njani umbane wombane okanye intambo yomjelo？ -News-Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd
Ungawatsala njani umbane wombane okanye intambo yomjelo？
Ixesha: 2021-06-25 Indawo: 4
Ukuncamathisela iingcingo ezininzi kwitheyiphu yentlanzi, khulula ubushushu obungaphandle kweengcingo kwaye usonge iingcingo ezingenanto ngamehlo ekupheleni kwetape yentlanzi. Gweba umtya ujikeleze zonke iingcingo eziqhotyoshelweyo kwaye usonge yonke intloko yoqhagamshelo lwentambo ngetape yombane. Ukongeza i-lubricant yokutsala ucingo yenza ukuba kube lula kakhulu ukutsala. Xa umsebenzi ufuna ucingo olukhulu kumjelo, amagcisa asebenzisa iteyiphu yentlanzi ukutsala intambo, emva koko asebenzise intambo xa kutsalwa ngocingo. Nangona ucingo lwentsimbi lomelele kwaye lubhetyebhetye, ayisiyongcamango ilungileyo ukutsala umthwalo onzima kakhulu ngesi sixhobo.
Ukuba nguwe omi ebhokisini ukondla ucingo, tsala zonke iingcingo ngokulinganayo kwii-spools zabo njengoko usondla iingcingo kwi-conduit. Kwakhona zama ukugcina iingcingo zingabotshelelwe njengoko ubondla. Lubricate iingcingo kwaye uzondle ngombhobho ngesandla esinye, kwaye usebenzise esinye isandla ukukhupha iingcingo kwii-spools.
Ukuba nguwe umntu owenza ukutsala kwelinye icala, tsala iingcingo ngamanqanaba amabini okanye amathathu eenyawo. Yima, ubale ukuya kutsho kwezine, uze uphinde uphinde uphinde. Jonga umntu owondlayo ukuze ubone ukuba esi sisantya esihle kubo. Ukutsala ngokukhawuleza okukhulu kunokubiza iintambo kwaye ubambe iminwe yomncedisi wakho ebhokisini. Shiya ixesha elaneleyo phakathi kokutsala ukuze umntu owondlayo abe nexesha lokuthambisa intambo kunye nokukhupha ngokwaneleyo kwii-spools ukondla kumjelo. Uphawu olulula lokwazisa omnye ukuba ukulungele ukutsalwa okulandelayo kukucofa kumjelo ngesixhobo sesinyithi.
Ngaphambili: Indawo yokusebenzela exakekileyo phambi kwe-CNY
Okulandelayo: Izikhongozeli ezi-7 zilayishwe kule veki